Vokatry ny famoronana lahatsoratra 30 izay hanentana anao | Famoronana an-tserasera
Vokatry ny famoronana 30 mamorona lahatsoratra izay hanome aingam-panahy anao
Mazava ho azy, izy io dia iray amin'ireo singa mahavariana indrindra eo amin'ny tontolon'ny famolavolana sary. Na ny pejin-tranonkala, ny kanto rakikira, ny afisy, na ny endrika endrika hafa, ny aingam-panahy amin'ny typografika dia mety ho loharano lehibe hanomezana singa iray lehibe amin'ny fanavaozana sy ny famoronana amin'ny asantsika. Ary io fiara io no manampy antsika hisolo tena ny hevitra tsy voafaritra tanteraka hamaritana azy ireo amin'ny alàlan'ny fiteny ary hanomezana akaiky ny mpijery amin'ny alàlan'ny fampiasana ny curve na ireo singa ofisialy. Avy eo avelanay miaraka amina fanangonana mihoatra ny mahaliana ianao Vokatry ny lahatsoratra 30 miaraka amina endritsoratra mahagaga ihany koa. Araka ny hitanao eto, na inona na inona mety ho lasa typography: Avy amin'ny varavarana vy amin'ny trano, hatramin'ny fehin'ny kiraro sasany, ny ranomainty penina na koa ny hoditra na ny tarehin'ny toetra amam-panahy ... Ny zavatra rehetra dia mety ho lasa fotony manohana ny fanazaran-tenantsika typografika.
Amin'ireto ohatra ireto dia ho hitanao ny fomba filalaovana ny karazana loharanom-pahalalana rehetra mba hamoronana fiatraikany ara-maso: Avy amin'ny lalao miaraka amin'ny firafitra, fampidirana endrika amin'ny ambaratonga samihafa amin'ny halaliny, fitambaran-loko na effets maivana. Izay rehetra mety ho lasa fomba iray tany am-boalohany izay manome famaranana miavaka amin'ny asanao. Ny fanandramana amin'ny fomba vaovao sy ny fiaraha-miasa amin'ny maso dia mety mitaky herim-po kely nefa azo antoka fa io ihany koa no safidy mahavariana indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Vokatry ny famoronana 30 mamorona lahatsoratra izay hanome aingam-panahy anao
Tsy misy teny
Miaro hevitra: toro-hevitra amin'ny fanomezana tetikasa amin'ny mpanjifanao